building brains | Little Moments Count
podcast hore risers
agabka loo shaqeeyaha
qalabka loo shaqeeyaha
ilaha cadaalada jinsiyadeed
dhisidda maskaxdu waxay bilaabataa dhalashada
Marka ilmuhu dhasho, maskaxda ilmuhu waxay qiyaastii saddex meelood meel le'eg tahay maskaxda qofka weyn. 90 maalmood gudahood, waxay ka badan tahay labanlaab mugga, ilaa 55 boqolkiiba cabbirkeeda kama dambaysta ah. Wax badan ka baro xaqiiqooyin soo jiidasho leh iyo saynis ku saabsan inta yar ee daqiiqadaha maalinlaha ah lagu tiriyo si ay u caawiyaan dhismaha maskaxda ilmaha.
sayniska iyo xisaabaadka ka dambeeya dhismaha maskaxda ilmaha
Dhisida maskaxdu waxay bilaabataa dhalmada ka hor waxayna sii socotaa ilaa qaangaarnimada. Nidaamku wuxuu dejiyaa aasaaska dhammaan caafimaadka, waxbarashada, iyo dhaqanka soo socda. Runtii waa wax cajiib ah oo saameynta daqiiqadaha yar ay ku leeyihiin maskaxda ilmaha waa mid xooggan.
Awooda maskaxdeena in ay wax iska badasho waa tan ugu xooga badan sanadaha ugu horeeya dhalashada kadib,taasi oo sahlaysa in lasameeyo xidhiidho neerfaha oo xoogan marka loo eego nolosha danbe.
isku xirka neerfaha
Nashqada maskaxda waxaa qaabeeya khibradaha waxayna ku horumartaa macnaha cilaaqaadka. Marka waalidiinta iyo daryeelayaashu ay "u adeegaan oo soo noqdaan" waxqabadyada ilmaha, maskaxdoodu waxay sameeyaan xiriiro neerfaha ah oo xooggan.
u adeega iyo
Dhaqdhaqaaqyada gadaal iyo gadaal ee cunuga waxay abuuraan xiriir aamin ah oo maskaxda ka ilaaliya walaaca.
5 tillaabooyinka Dhismaha Maskaxda u adeega oo soo noqo , Xarunta Harvard ee Koritaanka Ilmaha.
Xirfadaha fudud sida odhaahda kelmad ama aqoonsiga taageerada midabka hadhow horumarinta xirfadaha sida akhriska iyo qorista. Aasaaska hore ee daciifka ahi wuxuu saameeyaa wax kasta oo ka dambeeya.
Qaybta koowaad - dulmar ku saabsan qaab dhismeedka maskaxda
Qaybta labaad - u adeeg oo soo noqo
Qaybta saddexaad - walbahaarka sunta ah
Laga soo bilaabo Xarunta Harvard ee Ubadka Koraaya.
80% korriinka maskaxda marka ay da'da 3
Dhalashada, maskaxdu waxay hore u leedahay dhammaan neerfayaasha ay waligeed yeelan doonto. waxay labanlaabmaysaa cabbirka sanadka ugu horeeya, da'da seddexaadna waxay gaartay 80 boqolkiiba mugga qaangaarka. Xidhiidhada neerfaha ayaa la sameeyaa si ka dhakhso badan sanadahan marka loo eego wakhtiyada kale.
Xigasho: 80% maskaxda ubadku waxay ku koraan da'da saddex jir.1 Knickmeyer RC1, Gouttard S, Kang C, Evans D, Wilber K, Smith JK, Hamer RM, Lin W, Gerig G, Gilmore JH, J Neurosci. 2008 Nof 19;28(47):12176-82. Daraasad dhismeed MRI ah oo ku saabsan horumarinta maskaxda bini'aadamka laga bilaabo dhalashada ilaa 2 sano. Laga soo celiyay www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19020011 _
a malyuun isku xidhka neerfaha ilbiriqsikii
Maskaxda ubadku waxa ay martaa korriin cajiib ah laga bilaabo dhalashada ilaa saddex—waxa ay soo saartaa in ka badan hal milyan oo isku xidhka neerfaha ilbiriqsi kasta.
Xigasho: Xarunta Ubadka Koraysa (2007). Sayniska Kobcinta Carruurnimada Hore (InBrief). Laga soo celiyay www.developingchild.harvard.edu .
maqal 2 luqadood ama in ka badan ayaa ka caawiya diiradda
Dhallaanka si joogto ah loogula hadlo laba ama in ka badan ayaa leh hawl fulineed oo wanaagsan oo ay diiradda saaraan noloshooda dambe, gaar ahaan feejignaan ama feejignaan, taas oo ka caawisa waxqabadka dugsiga iyo shaqada.
Xigasho: Marian iyo Shook, Cerebrum, 2012 Sebtembar-Oct; 2012: 13. Faa'iidooyinka Garashada ee Laba-luqadlaha. Waxaa lagu daabacay online 2012 Oct 31, laga soo celiyay www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3583091/ .
madadaalo, talooyin fudud iyo waxqabadyo si aad daqiiqado yar u xisaabiso maalin kasta
eeg talooyinka &gt;
toy aad ugu jeceshahay
waa buug furan
codkaagu waa muusig maskaxdooda
Waxaan aqbalay shuruudaha &amp; shuruudaha